Waxaan jeclahay lugta bidix ee Messi - CIYAARO.COM
Home / Europa / Waxaan jeclahay lugta bidix ee Messi	Waxaan jeclahay lugta bidix ee Messi
Neymar kagama uusan leex-leexan inuu si toos ugu jawaabo su’aal deg-deg loo weydiiyay mar uu la hadlayay UOL taasoo aheyd lugta bidix ee Leo Messi iyo lugta midig ee Cristiano Ronaldo mid uu dooran lahaa. “Lugta bidix ee Messi ayaan qaadan lahaa. maxaa yeelay lug midig oo shaqo wnaaagsan qabaneysa ayaan heystaa” ayuu yiri isagoo qoslaya.
Waxaa kaloo la weydiiyay kooxda uu jeclaan lahaa inuu ku biiro Real Madrid iyo Manchester City, Neymar wuxuu jawaab kaga dhigay waxaan jeclahay in aan garaaco/ ka badiyo Real Madrid mar loo eego Manchester City!”
Related posts:Germany oo markii 4 yimid semifinal koobka aduunkaHogaamiyaha cusub ee Manchester United Ronaldo oo isku dhiibay MessiShare/Bookmark	newNeymar